Ihe omuma ihe omuma uzo esi eji ego nke ego tinye na SEO na uru bara uru
Ego ole ị ga-etinye na SEO dị iche iche n'ihi ụgwọndị ụlọ ọrụ nyere. Otú ọ dị, omume ahụ na-egosi na ọnụ ahịa dị elu nke ọrụ adịghị egosi na ọganihu nke SEO na-aga nke ọmamgbasa ozi. Enwere mmụba nke ntinye ego mbụ na-abawanye na mmụba nke uru ndị e nwetara? Enwere ụfọdụụzọ maka ụlọ ọrụ dị mkpa iji ruo eru inweta ụgwọ ọrụ?
Nik Chaykovskiy, ọkachamara na-ahụ maka Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwa ihe ndị na-emetụta nloghachi nkwụnye ego na SEO.
Ole oge na ego eji eme ihe na-emetụta ụda naọtụtụ - download cpanel 11 full. A na-enwe mmetụta dị ukwuu site na mgbanwe nke ihe ndị na-esonụ. N'ihi nke a, ịbawanye ntinye nkeotu ma obu ihe ole na ole n'ime ihe ndi a na - eme ka onu ogugu nke nloghachi bawanye.
Ọnụ ọgụgụ bụ ụgwọ ọrụ a rụrụ na mgbe niile. ỌtụtụNjikọ njikọ dị mma na-ejikọta ikike ngalaba, ebe ọdịnaya dị mma na-eme ka ibe dị na ndepụta Google.
Ogo na-adabere n'ogologo oge raara nye ọrụ ahụmere. Ebube ndị nwere ikike dị elu na-eme ka uru dị elu karịa ịchọta otu njikọ karịa nchịkọta ọkwa ndị dị ala na-enweta ọtụtụ njikọ.
Oge. Ịlaghachi site na ntinye ego anaghị adị ngwa ngwa ka ha bụ snowball n'elu oge..
Ihe na-eme ememe
Nlekọta anya n'ihu na azụmahịa nke dị na ahịaọtụtụ ebe ndị na-asọmpi agaghị enweta ihe dị ukwuu dị ka ọ ga-esi na ụlọ ọrụ ahụ pụta, bụ nke e nyefeworo maka mmepenke usoro ahia ahia. Otú ọ dị, e nwere ụzọ ọzọ nke na-enyere aka n'ịhụ ọkwa nke saịtị na obere egona ego chọrọ. Ụlọ ọrụ nwere ike gbasaa ọdịnaya n'ime ụlọ ahịa ahịa ma ọ bụ mpaghara mpaghara ebe ọ dịna-eme ka ọdịnaya dị ukwuu maka ndị na-eleta anya na-ahụ na ngalaba ndị a. Ihe ga-esi na ya pụta ga-abụ mmụba na mkpa nke ọdịnaya e nyere.
Ihe ọzọ na-echebara echiche bụ ogo nke ọdịnaya ahụchọrọ ka afọ ojuju tupu ịtọhapụ gị. Ihe ederede ma obu ihe di nkpa n'obi nwere ike ime ka ugwo Panda ga adiogo nhazi na nhazi ọchụchọ. Ọ na-eme ka a mara ụdị aha a na aha ya na ndị njem ya na ebe nrụọrụ weebụenwere ike inwe mmekorita ya na ndi nkwusa ndi na enyere aka na ulo. Ego kachasị ego na-eme ka o doo anya na ọ ga-adị mmaỌganihu dị ka ụlọ ahịa na-akwado asọmpi ahụ. Ịkwado elu karịa ndị na-asọmpi ga-achọ usoro atụmatụ nke karịrịndị asọmpi na-adabere n'ihe ọmụma nke omume kachasị mma n'ahịa ahịa.
Ịbanye na akaụntụ ahụ e kwurula na mbụ, anyị nwere ike ịbịaruo nkwubi okwu ndia:
Inweta ego ga-alaghachi ma ọ bụrụ na ọnụọgụ mbụmụbara ma e jiri ya tụnyere otu mgbanwe nke otu
Mkparịta ụka na-eme ka ọhụụ maka obere ego, ma ọ bụghịkpamkpam ime ka ọ ghara ime
Nweta ụfọdụ ụzọ nke ọdịnaya maka ọdịnaya na njikọ ụlọeme ka o doo anya na ulo oru na - enweta ohere
N'ikpeazụ, SEO abụghị usoro ihe niile na-achọghịatụmatụ ahia zuru ezu iji hụ mmetụta dị ịrịba ama. Ịkwụsị oge na mgbalị na-enyere aka n'inweta àgwà. N'ikpeazụ, ihe ndị ọzọntinye ego nke onye na-eme, ihe kachasị elu ọ na-enye. Ntinye ego nke obere na-adị irè ma ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ziri ezi.